नदी थाँक्रो, हामी लहरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २३, २०७७ तारानिधि भट्टराई
पानीको प्राकृतिक उपलब्धतालाई दीर्घकालसम्म सुनिश्चित गरी वातावरण स्वच्छ राख्न प्रत्येक स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबै स्रोतबारे एउटै लेखमा समेट्न गाह्रो हुने भएकाले यहाँ नदीलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
पृथ्वीको सतह अत्यन्त परिवर्तनशील छ । जमिन उचालिने, कोल्टो पर्ने, दबिने र समथर हुने प्रक्रिया विभिन्न ठाउँमा निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा हुने मनसुनी वर्षा या हिमपातले यी प्रक्रियालाई खासै फरक नपारे पनि वर्षाको भल वा हिउँ पग्लिएर निक्लिएको जल यिनैले निर्दिष्ट गरेको सबैभन्दा भिरालो सतहतिर बग्न थाल्छ । बग्ने क्रममा पानीले माटाका कणलाई पनि आफूसँगै लाँदा सानो कुलेसो बन्छ । यस्ता कुलेसाहरू आपसमा मिसिँदै जाँदा पानीको मात्रा पनि बढ्छ र मुख्य कुलेसो झन् फराकिलो र गहिरो हुँदै जान्छ । यो क्रम हजारौं वर्ष चलेपछि त्यहाँ पानीढलो बन्छ, जहाँ मुख्य नदीका साथसाथै यसका सहायक नदीनाला पनि हुन्छन् । हाम्रो देशका साना–ठूला सबै नदीनालाको उत्पत्ति यसरी नै भएको हो ।
कुनै पनि नदी त्यो क्षेत्रमा कार्यरत भौगर्भिक शक्ति र जलवायुसिर्जित परिस्थितिको साझा नतिजा हो । नदीको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ र बाटो वा बग्ने तरिकाले ती कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ । त्यसैले नदी भन्नाले यसको सम्पूर्ण लम्बाइ (उद्गमस्थलदेखि विसर्जनस्थलसम्म नदीले ओगटेको भूभाग) लाई सम्झनुपर्छ, न कि आफूअगाडि देखिएको भाग मात्र । नदीले आफू बगेको सम्पूर्ण बगरलाई आपसमा यसरी गाँसेको हुन्छ, यसको कुनै भागमा प्राकृतिक हलचल वा मानव हस्तक्षेप भयो भने त्यसको नतिजा नदीको सम्पूर्ण भागमा वा कुनै विशिष्ट स्थानमा देखा पर्छ । उदाहरणका लागि, फराकिलो बगर बनाएर बगिरहेको नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जमिन भौगर्भिक कारणले उचालिन थाल्यो भने, नदीको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रतिर पहिलेको दाँजोमा चाँडो बग्न थाल्छ । चाँडो बग्दा पानी नदीको केन्द्रीय भाग (मुख्य भँगालो) तिर सोहोरिन्छ । गति र मात्रा दुवै बढेपछि पानीले आफू बगेको ठाउँको माटोलाई पनि सकेसम्म धेरै बगाउने हुनाले त्यो भाग वरिपरिको भन्दा गहिरो हुन्छ ।
फलस्वरूप, पानीजति गहिरिएर बनेको नयाँ बगरमा बग्न थाल्छ भने पुरानो बगरको बाँकी अंशचाहिँ किनारमा फाँटका रूपमा देखा पर्छ । यस्तै प्रक्रिया दोहोरिँदा नदी झन् गहिरिन्छ र दुवै किनारमा थप बगर देखा पर्छ । बगर वा फाँटमा भएको ढुंगा–माटो नदीले नै बगाउँदै ल्याएर त्यहाँ विसर्जन गरेको हो । नदी किनारमा यसरी विकास भएका कान्ले फाँटहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूले खेतबारी बनाएर जीविकोपार्जन गरेका हुन् । यसको अर्थ हो— नदीले हामीलाई गाउँ एव सहर बसाउन र खेतीपाती गर्नयोग्य भूमि मात्र उपलब्ध गराएन, जीवन धान्न नभई नहुने माटो र पानीको पनि जोहो गरिदिएको छ । भूमिगत जलभण्डारलाई पुनर्भरण गर्दै वर्षाको पानीलाई आफूमा समाहित गरेर किनारका बस्तीहरूलाई डुब्नबाट बचाउने काम पनि नदीले नै गरिआएको हो । पानीको विकल्परहित सदाबहार स्रोत मानेरै होला, हाम्रा पुर्खाहरू नदीलाई देवीदेवताका रूपमा पूजा गर्थे, नदीको प्राकृतिक बहावलाई बिथोल्दैनथे र नदीवरिपरि फोहोर गर्नु हुँदैन भन्थे ।
अचेल हामीले नदीको महत्त्व बिर्सिएका छौं । नदीले प्राकृतिक रूपमा सिर्जिएको बगरलाई मिचेर हामीले नदीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएका छौं । कतिपय सानातिना नदीको त नामनिसानै मेटाएर बस्ती बसाएका छौं या खेती गरिरहेका छौं । शौचालयको निकास, कलकारखानाबाट निक्लने प्रदूषण एवं सहरबाट निक्लिएका विविध फोहोरमैला फाल्ने ठाउँ भएका छन् धेरैजसो नदी । मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउन अतुलनीय भूमिका खेलेको नदीलाई हामीले गरिरहेको तुच्छ व्यवहार प्रकृतिले कतिन्जेल सहला ?
सिँचाइ र विद्युत्का लागि बाँध बनाएर तल्लो तटीय क्षेत्रतिर बग्नलाई कति पनि नराखी सबै पानी हाम्रो स्वार्थमा प्रयोग गर्न नहिचकिचाएका प्रसंगहरूलाई समेत हामीले उपलब्धि मानेका छौं । त्यस्ता बाँधमार्फत नदीको पानीमा आश्रित जलचरहरूको जीवनचर्यालाई तहसनहस बनाएकामा पनि हामी चिन्तित देखिँदैनौं । उदाहरणका लागि, नदीमा हुने थुप्रै जलचरमध्ये बाम माछा पनि एउटा हो । वयस्क हुनै लाग्दा बंगालको खाडीबाट यो माछा गंगा हुँदै नेपाली नदीहरूमा विचरण गर्न निक्लन्छ । गंगाबाट गण्डकी हुँदै चितवनको देवघाट आइपुगेपछि यो माछा कालीगण्डकीतिर मोडिन्छ । कालीगण्डकीको तीव्र बहावविरुद्ध पौडँदै यो जलचर रिडी, बेनी, जोमसोम हुँदै कागबेनीसम्म पुगेर पुनः बंगालको खाडीतिर फर्कन्छ । हजारौं वर्षदेखि चलिआएको बाम माछाको यो रोमाञ्चक यात्रालाई हामीले नदीमा बाँध बाँधेर पूर्णविराम लगाइदिएका छौं । त्यस्ता बाँध बनाउँदा माछालाई आवतजावत गर्न ‘फिस पास’ बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यसलाई पालना गरिएको देखिँदैन ।
नेपालले ओगटेको भूगोलमा मानिसहरू आउनुभन्दा धेरैअगाडिदेखि नै नदीहरू थिए । तिनै नदीको सहारा पाएर मानव सभ्यता यहाँ फस्टाएको हो । अर्थात्, नदी थाँक्रो हो भने, हामी लहरा हौं । तसर्थ, नदीहरूको संरक्षण र संवर्द्धन नगरी मानव अस्तित्व लामो समय कायम रहन सक्दैन । अहिले संसारलाई नै गाँजेको कोरोना भाइरसको मानिसमा संक्रमण हुनुको एउटा सम्भावित कारण वन्यजन्तु–मानिस सम्बन्धको अनुशासनमा आएको विचलनलाई मानिएको छ ।
गर्मी याममा हाम्रो देशका कैयौं भागमा पानीको अभाव हुने गरेको छ । त्यसमाथि, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि र खडेरी बढिरहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कथंकथाचित् मनसुनी वर्षा ढिलो भयो या देशका विभिन्न भागमा लामो खडेरी पर्‍यो भने पानीको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कल्पनासम्म हामीले गरेका छैनौं । यस्तो विषम अवस्थामा, गाउँ–बस्ती नजिकका पानीका सानातिना स्रोतहरू सुके भने नजिकैको अलिक ठूलो नदीको पानीमा भर पर्नुबाहेक अर्को उपाय हुँदैन । नदीनालालाई हामीले प्रदूषित नगरे संकटका बेला तिनैको पानी निस्फिक्रीसँग प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य, हामीले धेरै नदीलाई छुनै नमिल्ने गरी प्रदूषित गरेका छौं । हाम्रो सौभाग्य, नदीहरू मृत नै भइसकेका छैनन् । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले तिनलाई अझै पनि प्राकृतिक स्वरूपमा फर्काउन सकिन्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम हो— नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी त्यहाँभित्रको अनधिकृत बसोबासलाई यथाशीघ्र हटाउनु । दोस्रो, नदीमा फोहोर फाल्न दिनै हुन्न ।
तेस्रो, नदी किनारमा वृक्षरोपण गरी रेखदेखको जिम्मा स्थानीय बासिन्दालाई सुम्पिनुपर्छ । चौथो, नदीबाट अवैज्ञानिक तरिकाले बालुवा–गिट्टी झिक्ने र रैथाने जलचरको अनधिकृत सिकार गर्ने वा बासस्थान भत्काउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । पाँचौं, स्थानीय सरकार एवं प्रदेश सरकारले आआफ्ना क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नदीलाई कुनै पनि किसिमको मानव हस्तक्षेपरहित भएर प्राकृतिक रूपमा वहन दिनुपर्छ । छैटौं, नदीमा पुल वा बाँध बनाउँदा वा नदीको पानी विविध काममा प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी त्यसको नतिजालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जसरी हामी अहिले कोभिड–१९ सँग जुध्न एकढिका भएका छौं, त्यसै गरी नदीनाला बचाउने काममा पनि जुटिहाल्नुपर्छ ।
(भट्टराई भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।) प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ १०:०५
नेपाल र अमेरिकाका यी हत्या संरचनागत हिंसाकै हिस्सा हुन् । यस्तो हिंसा कुनै व्यक्ति वा समूहमा मात्र निहित नभई समाजका विभिन्न संरचनामा लुकेको हुन्छ ।
जेष्ठ २३, २०७७ मैना धिताल
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापलिसमा अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडले प्रहरी नियन्त्रणमा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरीबाट नियन्त्रण लिने क्रममा धेरै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिन थालेपछि अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ ले अभियानको रूप लिन थालेको छ । रुकुम घटनापछि नेपालमा पनि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ ले, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा, गति लिइरहेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा दुई घटना फरक लागे पनि यिनको जड भने एउटै हो— जातिवाद (रेसिजम) ।
अमेरिकामा जातिवाद र रङ्गभेद
फ्लोयडलाई चुरोट किन्ने क्रममा नक्कली नोट दिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यस क्रममा गोरा (ककेजियन) समुदायका प्रहरी अधिकृतले घाँटीमा धेरै बेरसम्म घुँडाले थिचेपछि उनको मृत्यु भयो । त्यसबीच उनले ‘आई क्यान्ट ब्रिद’ (म सास फेर्न सक्दिनँ) भनिरहेका थिए तर ती अफिसरले उनको याचना सुनेनन् । उनी मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । देशभरि नै कोभिड–१९ का कारण अपनाइएको सामाजिक दूरीलाई बेवास्ता गर्दै मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन्, जसलाई सम्हाल्न राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई हम्मे परेको छ । कतिपय ठाउँमा कर्फ्यु नै लगाइएको छ ।
यसअघि पनि गोरा समुदायका प्रहरीबाट थुप्रै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिएका छन् । मेल एन्ड गार्डेनको ‘रेसिजम इज सो मच मोर द्यान वर्ड्स’ (२०१६) लेखका अनुसार, अफ्रिकी मूलका मानिसविरुद्धको जातिवादको इतिहास ४ सय वर्षअघिको विश्व आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यसले अफ्रिकी मानिसहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा लिँदै दास व्यापार सुरु गरेको थियो । त्यति बेला अफ्रिकीहरूलाई ‘पूर्ण मानव’ का रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो । त्यो प्राचीन दासत्व उन्मूलन भए पनि अफ्रिकीहरूप्रतिको अपमानजनक चित्रण भने कायमै छ, जसले दासत्वको आधुनिक स्वरूपलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । अमेरिकामा जातिवादलाई ट्रेड युनियन, राजनीतिज्ञ र सुरक्षासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि उत्तिकै मलजल गरिरहेको बताइन्छ ।
पिउ रिसर्च सेन्टरको एउटा अनुसन्धान अनुसार, अमेरिकामा डेढ सय वर्षअघि नै संविधानको तेह्रौं संशोधनमार्फत दासत्व उन्मूलन भएको थियो । तर त्यसको विरासत कायमै छ, जसको प्रभाव अफ्रिकी–अमेरिकीहरूमा परिरहेकै छ । पिउको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशतले अमेरिकाले जातीय समानताका लागि खासै प्रगति गर्न नसकेको स्विकार्दै अफ्रिकी–अमेरिकीले ककेजियनकै समान अधिकार पाउनेमा आशंका गरेका छन् ।
बाराक ओबामा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै धेरैलाई लागेको थियो, अमेरिकामा अब जातिवाद अन्त्य भयो भनेर । तर, स्थिति सोचेजस्तो भएन । उनको कार्यकालको अन्तिमसम्म रङ्गभेदी र जातिवादी माहोल झनै बढ्यो, ओबामाको नीतिगत एजेन्डालाई जातीय रङ्ग दिने उद्देश्यले ‘टी पार्टी’ ले गरेका प्रहार र संगठित रूपमा चलाइएका अन्य जातिगत अभियानमार्फत । वासिङ्टन पोस्ट (२०१६) का अनुसार, सन् २०१२ को सुरुतिर फ्लोरिडामा काला समुदायका एक किशोरको बन्दुक प्रहारबाट मृत्यु भएपछि संस्थागत जातिवादी घृणाबारे गम्भीर बहस पुनः सुरु भयो । बहससँगै थुप्रै हाइप्रोफाइल अफ्रिकी–अमेरिकीहरू सुरक्षाकर्मीका हातबाट मारिएका प्रमाणहरू आउन थाले ।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै जातीय घृणा फैलाउनु वा असंवेदनशील कुरा गर्नु मान्छेहरूका लागि सामान्य बन्दै गएको पिउको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी हिस्प्यानिक (५८ प्रतिशत), अफ्रिकन (७६ प्रतिशत) र एसियन (७६ प्रतिशत) मूलका अमेरिकीमध्ये धेरैजसोले रङ्ग तथा जातीयताका कारण विभेद खेप्नुपरेको बताएका थिए । ६७ प्रतिशत गोरा अमेरिकीले भने आफूहरूले त्यस्तो विभेद कहिल्यै नभोगेको बताए ।
नेपालमा दलितमाथि हिंसा
रुकुममा नवराजसहित आधा दर्जनको हत्या घटना उत्तिकै हृदयविदारक छ । यसमा उमेर नपुगी बिहे गर्न खोजेकाले उक्त घटना हुन पुगेको भन्नेजस्ता तर्क आउने गरेका छन् । अन्तरजातीय बिहेलाई स्विकार्नुको अर्थ बालविवाह नै भए पनि हुन दिनुपर्छ भन्ने हैन । प्रशासनले चाहेमा बालविवाहलाई सहजै रोक्न सक्छ । उमेर नपुगी गरेको बिहे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नै छ । तर, जातीय अहंकारले हिंस्रक रूप लिँदा त्यत्रा युवाको ज्यानै गयो ।
जातीय विभेदमा ज्यानै गुमाउनुपरेको यो पहिलो घटना हैन । रुकुम घटनाको केही दिनअघि रूपन्देहीमा दलित किशोरी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो । स्थानीय नेताहरूले उनलाई बलात्कार गर्ने कथित उपल्लो जातिको युवकलाई ‘सजायस्वरूप’ उनैसँग बिहे गर्न दबाब दिएको एक दिनपछि उनको शरीर रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
कान्तिपुरमै केही दिनअघि प्रकाशित ‘जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन’ लेखमा आहुतिले उल्लेख गरेअनुसार, विगत दुई वर्षमा दुई दर्जन दलित महिला–पुरुषले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । र, तिनमा अधिकांश अपराधीले सजाय पाएका छैनन् । यस्तै, ‘नेपाल मनिटर’ नामक मानवाधिकार संस्थाको अभिलेखअनुसार, यो वर्ष मात्रै जातीय विभेद र हिंसाका २७ घटना भएका छन् । धेरैजसो घटनाको रिपोर्ट नै हुँदैन । कानुनी रूपमा जातीय विभेद समाप्त भए पनि व्यवहारमा उस्तै छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रताडित छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उनीहरूले छोएको पानीधरि चल्दैन, चल्छ त केवल उनीहरूको श्रम र पसिना ।
यी दुई घटनामा यति बेला देखिने गरी हिंसा भए पनि वास्तविक रूपमा यी संरचनागत हिंसाकै हिस्सा हुन् । संरचनागत हिंसा कुनै व्यक्ति वा समूहमा मात्र निहित नभई समाजका विभिन्न संरचनामा लुकेको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धार्मिक सोच, रूढिवादी संस्कार र परम्पराले संरचनागत हिंसालाई बलियो बनाइराख्छन् । यसका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन्, चाहे त्यो अमेरिकामा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नाममा अफ्रिकी–अमेरिकीसहित आप्रवासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहार होस् वा भारतमा ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ का नाममा मुस्लिम समुदायमाथि गरिएको ज्यादती । नेपाल पनि यस्तो अतिवादबाट अछूतो छैन, जसको असर दलित, महिला र मधेसी लगायतका समुदायमा परिरहेकै छ । देशलाई नेतृत्व दिनेहरू नै उल्टो बाटोमा हिँडेपछि अनुयायीहरूले त्यसको सिको गर्ने नै भए ।
संरचनागत हिंसाको असर राजनीति, रोजगार र गरिबीसहित समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । जस्तो कि, अमेरिकामा श्रम तथ्यांक ब्युरोले सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार त्यस बेला त्यहाँको रोजगार क्षेत्रमा ७८ प्रतिशत गोरा समुदायको प्रतिनिधित्व थियो भने, १३ प्रतिशत अफ्रिकी– अमेरिकी र ६ प्रतिशत एसियाली मूलका मानिसको ।
यस्तै, युएस सेन्सस ब्युरोको तथ्यांकअनुसार, नेटिभ अमेरिकन (अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी समुदाय) पछि सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अफ्रिकी–अमेरिकी समुदाय (२०.८ प्रतिशत) मै छ । नेपालमा आरक्षणका कारण पछिल्लो समय दलितले केही राजनीतिक अवसर पाए पनि राज्यका सबै संयन्त्रमा उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । दलितले जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर राज्यसंयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ । निजामती कर्मचारीमध्ये दलितको संख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै, ब्राह्मण समुदायको साक्षरता दर झन्डै ८२ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायको ५२ प्रतिशत छ ।
अरूको पहिचान, संस्कृति र शारीरिक विशेषताप्रति घृणा विश्वभरि नै जातिवाद संरचनागत हिंसाको अभिन्न अंग बनेको छ । संरचनागत हिंसाले कालोपनालाई प्रभावकारी ढंगले अपराधीकरण गर्दै आएको छ । अफ्रिकी–अमेरिकीको कालोपनालाई ‘पशुकरण’ गर्ने प्रवृत्तिको जरो दासत्वसँगै जोडिएको छ । तर, कालोपनाप्रति घृणा नेपालमा पनि कम छैन । खास गरी मधेसी समुदायमाथि ‘कालो रङ्ग’ कै कारण हुने अपमानका घटना काठमाडौंका सडकगल्लीदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
जात, लिंग, धर्म, छालाको रङ्ग र आर्थिक हैसियतका आधारमा विभेद र अपमान गर्नु हाम्रो सांस्कृतिक पाटो बनिसकेको छ । जब हामी कुनै कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छौं, त्यो अन्ततः संस्कृति बन्न जान्छ । संस्कृति बदल्नु भनेको हाम्रो बानीबेहोरा बदल्नु हो । के हामी हिंसा देखेर पनि चुप रहने वा ढाकछोप गर्ने बानी बदल्न तयार छौं ? हामी कसैमाथि भएको हिंसाको खुलेर विरोध गर्न सक्छौं ? भनिन्छ, ‘साइलेन्स इज भ्वाइलेन्स’ । जबसम्म छिमेकीले यस्ता घटना देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन्, राज्यले विभेद घटाउन कुनै चासो दिँदैन र यसलाई सामान्य विषय ठानिरहन्छ, जबसम्म प्रशासनले पहुँचवालाहरूको प्रभावमा परेर अपराधीलाई बचाइराख्छ, जबसम्म राजनीतिक दलहरूले दोषीलाई बचाइरहन्छन्, तबसम्म जातीय अहंकारको आगोले धेरै अंगिरा र नवराजहरूको ज्यान लिइरहनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०९:५९